News | Tag: pakistan
पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरस: कति पुगे संक्रमितको संख्या
एजेन्सी । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसका कारण संक्रमितको सङ्ख्या पाकिस्तानमा एक हजार ५०० पुगेको छ ।
एजेन्सी । प्राणघातक कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको संख्या एक हजार भन्दा बढी भएपछि पाकिस्तान सरकारले सबै आन्तरिक यात्रुबाहक हवाई उडान स्थगन गरेको छ ।
पाकिस्तानमा हिमपहिरो पाँच जनाको मृत्यु
एजेन्सी । पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम प्रान्त खैबर पाख्तुनख्वाको हिमाली क्षेत्रमा मङ्गलबार राती गएको हिमपहिरोमा परी कम्तीमा पाँच व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बुधबार जानकारी दिएको छ ।
शाहरूख खानकी बहिनीको पाकिस्तानमा निधन !
एजेन्सी । बलिउडका सुपर स्टार शाहरुख खानकी काकाकी छोरी नूरजहांको पाकिस्तान पेशावर शहरमा निधन भएको छ । पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार उनको निधनबारे मंगलबार जानकारी दिइएको हाे । उनको निधनको खबर भाइ मंसुर अहमदले पुष्टि गरेका हुन् ।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इरान र साउदी अरेबियाको भ्रमणमा
एजेन्सी । अमेरिकी ड्रोन हमलामा इरानी सेनापति कासिम सुलेमानी मारिएपछि बढ्दो तनाव कम गर्न पाकिस्तानका विदेशमन्त्री आइतबार तेहरानको भ्रमणमा गएका छन् ।
एजेन्सी । प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानमा देशभरी इन्टरनेट सेवामा समस्या भएको छ ।
कति छ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा छन् पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान । देशका लागि केही गर्ने आाँट देखाएका उनले पाकिस्तानको विकासका लागि फण्ड जम्मा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तानको दाबीः काश्मिरमा भारतीय सेनालाई ठुलो क्षति
एजेन्सी । काश्मिरमा भारत र पाकिस्तानी सेनाबीच पछिल्लो समय गोली हानाहानको अवस्था रहेको छ । भारतले आफ्नो तर्फबाट पाकिस्तानमा ठुलो क्षति पुर्याएको
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साउदी अरबिया प्रस्थान
एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान आइतबार इरानतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
पाकिस्तान भूकम्पः मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो
एजेन्सी । पाकिस्तानमा गत मङ्गलबार गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुगेको प्रहरीले बताएको छ ।